lulu: အခေါ်အဝေါ်များ (၃)
at 5:30 PM Labels: အခေါ်အဝေါ်
ဒီနေ့တော့ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကို ဆက်ရေးပေးပါဦးမယ်နော်။
၁။ ကရဝေး - bay leaf
၂။ ကညွတ် - asparagus
၃။ ကင်ပွန်းသီး - soap nut
၄။ ကင်ပွန်းရွက် - soap acacia leaves
၅။ ကင်းပုံသီး - wild snake gourd, coecinia fruit
၆။ ကုလားပဲ - chick pea
၇။ ကိုကိုး - cocoa
၈။ ကျောက်ပွင့် - sea weed
၉။ ကိုက်လန်ရွက် - Chinese kale
၁၀။ ကန်စွန်းရွက် - water cress, rabbit green, morning glory
၁၁။ ကန်စွန်းရိုးနီ - water green
၁၂။ ကန်စွန်းဥ - sweet potato
၁၃။ ကိုင်းဥ - elephant grans fruit
၁၄။ ကျောက်ဖရုံသီး - white pumpkin, marrow
၁၅။ ကြက်သွန်နီ - onion
၁၆။ ကြက်သွန်ဖြူ - garlic
၁၇။ ကြက်သွန်မြိတ် - leek, onion tops, onion shoots, spring onion
၁၈။ ကြက်ဟင်းခါးသီး - bitter gourd
၁၉။ ကြောင်လျာသီး - trumpet
၂၀။ ခရမ်းကစော့သီး - Indian nightshade
၂၁။ ခရမ်းသီး - brinjal (egg plant), aubergine
၂၂။ ခရမ်းချဉ်သီး - tomato
၂၃။ ခံတက်ပင် - garlic pear
၂၄။ ခံတက်ရွက် - three leaved caper
၂၅။ ခ၀ဲသီး - ridge gourd
၂၆။ ခါဗုဥ - turnip
၂၇။ ချယ်ရီသီး - cherry
၂၈။ ချဉ်ပေါင်ရွက် - roselle, sour green
၂၉။ ခရမ်းကြွပ်သီး - solanum molongena
၃၀။ ဂျူးမြစ် - Indian leek
၃၁။ ဂျုံ - wheat
၃၂။ ဂျင်းစိမ်း - ginger salad
၃၃။ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန်လာထုပ် - cabbage
၃၄။ ဂေါ်ရခါးသီး - chayote, marrow
၃၅။ ဂုံမင်း - amomum corynostachym
၃၆။ ငရုတ်သီး - chilly, chilli
၃၇။ ငရုတ်ကောင်း - pepper
၃၈။ ငရုတ်ပွ - paprika
၃၉။ ငရုတ်ခါးမျုိုး - king of bitters
၄၀။ ငါးရံ့ပတူရွက် - nodding clerodendron
၄၁။ စပါးလင် - lemon grass
၄၂။ စမှုန်စပါး - aniseed, dill, fennel
၄၃။ စပါးလင်မွှေး - citronella
၄၄။ စမုန်နက် - black cumin
၄၅။ စပါး - paddy
Anonymous February 8, 2008 at 9:01 PM
Ma Lu Lu,
Some of English Terms are not as exact as the real world. For example, Kyat Thon Mate = Spring Onion.
လုလု February 9, 2008 at 10:45 AM
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ကျွန်မလည်း အခေါ်အဝေါ်အားလုံးကို မသိဘူး ဖြစ်နေလို့ပါနော်။ အခုလို မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Anonymous March 13, 2008 at 10:04 AM
some countries call "kan son ywat = morning glory".
လုလု March 9, 2010 at 4:25 PM
Anonymous June 17, 2010 at 7:57 AM
How do we say "Myin Khwar Ywat" in botanical name, common name, please. Thank you very much.
sis, got to know the name of "Myin Khwar Ywat", Indian pannywort in English name and Centella asiatica is Botanical name.
ali234 September 16, 2012 at 2:04 PM
Unknown January 24, 2013 at 6:47 PM
Sis ,I want to know `Chin Saw Kar Thi`
Unknown September 27, 2013 at 11:26 AM
ကျောက်ပွင့်ကို scientific name များသိရင်ပြောပြပေးပါ ကျွန်တော် email 09thantoeaung@gmail.comပါ
ကန်စွန်းကို တော်တော်များးများက water cress လို့ပြောပေမယ့် water spinach ကမှ ပိုမှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..။ Google မှာလဲ ပုံချင်းယှဉ်ကြည့်တော့ ပိုသိသာစေပါတယ်..။
May January 20, 2015 at 1:35 PM
ချဉ်စော်ကားသီးကို Quince fruit လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျောက်ပွင့်က Snow Fungus လို့ခေါ်ပါတယ်။ Scientific Name က Tremella fuciformis လို့ခေါ်ပါတယ်။